Robert Mugabe | The Africa Report
Monday, 29 August 2016 Nqobile Bhebhe
Friday, 05 August 2016 Janet Shoko
Zimbabwe protest leader's day in court gathers thousands
Wednesday, 13 July 2016 Nicholas Norbrook
A court appearance* for a pastor who has helped mastermind one of Zimbabwe's largest civil society anti-government protests has drawn thousands of supporters to the court building.
A one million man march for Zimbabwe's Mugabe
Tuesday, 24 May 2016 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe's ruling Zanu PF will on Wednesday hold what they describe as a million-man march to show support for veteran leader, President Robert Mugabe, who is fighting to keep his party in tact as questions over his succession continue to haunt him.
Wednesday, 18 May 2016 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe's diplomats have gone for several months without pay amid moves by the government to cut their allowances by 25 percent as part of far reaching cost cutting measures.
Zimbabwe: Mixed feelings over ZimAsset's "massive achievements"
Tuesday, 17 May 2016 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe eyes new financing after November financing programme to IMF
Friday, 22 April 2016 MacDonald Dzirutwe
Zimbabwe: Independence day not about denouncing western powers, opposition tells Mugabe
Monday, 18 April 2016 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe on Monday marks 36 years of independence from British colonial rule under conditions many say are self inflicted problems.
Black Zimbabwe farmers resist compensating evicted white landowners
Thursday, 24 March 2016 MacDonald Dzirutwe
Thursday, 10 March 2016 MacDonald Dzirutwe